Godaansa Fedha Sabaawaa – Gubirmans Publishing
Demokraasiin fakmishoo ilmaan namaa hundi bira gahuuf hawwani. Hanga yoonaa abbala malee hojii irra ooluu saa hin agarree.Kun akeeka namoota akka Abraham Loncolniin dansatt “Mootummaa ummataa ummataaf …” jedhamee furameera. Garuu gara caaluu shaakala utuu hin tahin akeeka tahee hafe. Kanaaf malee akka jedhamutt demokraasiin hangammeessa bulcha malbulchaa kan qabeen saa yoo xinnaate “ walqixxummaa, birmadummaa, qondaalota qajeeltoon kennatamanii fi bilisummaa haasaa fi of ifsuu” of keessaa qabu. Kanneen keessaa tokko hirdhannaan demokraasiin hin jiru. Akka bar tokko Ittaanaa Barreessaan Finnaa jedhett Amerikaan “DEMOKRAASIIN HIN JIRU, GAMTAAN HIN JIRU” kan jedhutt amana. Itophiyaatt qabee yartuu dhahaman keessaa hundatu hanqata. Garuu gamtaan arfacha jaarraaf hanqatee hin beeku. Waggoota tokko fi sadii tursuun hama hin tahu; yeroo dheeraa akkasiif biyyi addunyaa keessaa dagaagaan kun irbuu seene hin guutin hafuun malalchiisaa dha. Utuu moo’ummaan ummatootaa ulfeeffame dhimma keessa waliif humna fagoott iyyachuun barbaachisaa hin turre. Dhibdeen saanii godinaa keessatt furamuu dandaha ture. Garuu sun hawwa tahee hafus jara dhimmicha keessa seenan irraa qajeeltuu eeggachuun waan guddaa miti.